Ndeapi machira emubhedha akanyanya kunaka?
Location: musha » Kutumira » Guestpost » Ndeapi machira emubhedha akanyanya kunaka?
Mabheti ekutanga anogona kuvandudza kurara kwako, nepo sub-par iwo anokurumidza kukanganisa kunakidzwa kwekurara. Mibhedha yakaoma uye yakaoma. Yakakodzera inofanira kuva yakareba-yakareba, yakapfava, hypoallergenic, uye isingamiri kune wrinkles. Zvine musoro kuisa mari kamwe chete mumabhedha emhando yepamusoro anogadzirwa kubva kumidziyo yakakodzera pane kutenga madiki enguva dzose.
Zvinhu zvipi zvatinoshandisa?
Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa pamubhedha wemhando yepamusoro? Dzinofanirwa kunge dziri dzechisikigo, dzakasimba, uye dzakachengeteka kune hutano. Linens uye Hutch kushandiswa:
zvinoshamisa zvinyoro uye zvinogara kwenguva refu microfiber;
yaumbozha yakatsetseka bamboo textile;
100% yekotoni yakasikwa.
Microfiber Luxury sheets seti dzakanaka kune vanhu vanotambura nemhando dzakasiyana-siyana dzekusawirirana uye dzakanakawo mumwaka unotonhora sezvo dzichidziya zvakanaka uye dzinopa kutenderera kwemhepo kwakanaka. Nyaya iyi inopesana nekugadzirwa kwemapiritsi, kuputika, haikwidzi, uye inochengetedza chimiro chakanaka kwenguva yakareba. Mishenjere yekurara yakatetepa, yakatsetseka sesilika, inotora mwando zvakanaka, inofema, uye inotaridzika zvakanaka. Mibhedha yakagadzirwa kubva munyaya iyi yakakodzera vana. Mashizha edonje akanakira kushandiswa kwemazuva ese, ane hushamwari hweganda, uye anogara.
Flannel ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kufarirwa zvemachira emubhedha. Benefits of flannel machira:
yakagadzirwa kubva kuzvinhu zvakasikwa;
hypoallergenic, haiunganidzi guruva, uye haikonzeri maitiro emagetsi;
inotora unyoro uye ziya zvakanaka;
kupfeka-resistant uye ichagara kwemakore mazhinji nekutarisirwa kwakakodzera;
inotonhorera uye inofadza ganda.
Zvisinei, flannel ine zvimwe zvisingabatsiri. Inofanira kushambidzwa pakudzika kwakadzika kudzivirira shrinkage uye deformation yemucheka. Flannel inomesa kwenguva yakareba. Hazvisi zvakakosha mushure mekugeza, asi zviri nani kusiya mubhedha usina kuvharwa kusvikira mapepa akaoma. Bvisa mavara pamubhedha weflannel masheets musati wageza muchina; zvikasadaro, vangagara nokusingaperi.
General mazano ekutarisira mubhedha
Unofanira kugara uchigeza mapepa ako emubhedha usati waashandisa kekutanga; izvi zvichachenesa, kugadzirisa ruvara, uye kupfavisa jira. Shandura mavhavha nemapillowcase mukati kuti uchenese makona eguruva. Isa pepa mukati mevhavha yeduvet uye vhara zipper kana mabhatani. Geza mapepa ane mavara akasiyana kubva kune machena. Tarisa kutonhora kwekushambidza. Iyi mitemo iri nyore ichakubatsira iwe kuwedzera hupenyu hwemibhedha yako. Linens uye Hutch ndinoshuvira iwe zviroto zvinofadza pamachira akapfava uye akagadzika emubhedha.
Ko Maneja Wenzvimbo Yako Anofanira Kubvumidzwa?
Mazano Ekugadzirira ZVOKUZORORO DZINSINA Stress
Kukunda kwakakosha pakurwisa timeshare scam muCosta del...